तपाईको परिवारको घर सजीलो गर्न सरल तरिकाहरू - साम्प्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
सम्पादकको पिक 10 सक्छ, 20217सक्छ, 2021 सियरा पावेल ब्लग, सम्पादकको पिक, जीवन शैली
तपाईंको छानामा कुनै फाटेका टाइलहरू वा चुहिनेहरू मर्मत गर्नु एउटा चाल हो जुन तपाईंको घरमा गम्भीर पुन: बिक्रि मूल्य थप गर्दछ।
नयाँ र अधिक फैशनेबल मोडेलहरूको साथ तपाईंको कालीनहरू र कार्पेटहरू बदल्नु मात्र पहिलो सुरु हो।
भुइँ र टाइलको अवस्था के हो?
के तपाइँ आफ्नो घर को बारे मा धेरै नयाँ नयाँ तरिकाहरू खोज्दै हुनुहुन्छ? त्यहाँ विधिहरूको एक विस्तृत विविधताहरू छन् जुन तपाईं यसो गर्न कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईंले आफ्नो बजेटमा विशाल दाँत राख्ने बारेमा चिन्ता लिनु पर्दैन। यी नवीकरणहरू तपाईंले अपेक्षा गरेको भन्दा कममा गर्न सकिन्छ। यहाँ केहि सब भन्दा राम्रो मर्मतहरू छन् जुन तपाईले आफ्नो घर बनाउन सक्नुहुनेछ।
यदि तपाईले पर्खालमा कालो वा भिजेको दागहरू, अचानक थरथरहरू, वा अन्य चिन्ताजनक संकेतहरू देख्नुभयो भने, अब व्यावसायिक छतमा तपाइँको स्थानीय विशेषज्ञहरूलाई कल गर्न राम्रो समय हो।
तपाईंको रूफ फिक्स अप गर्नुहोस्
तपाईको घरको पहिलो क्षेत्रहरू जुन तपाईले हेर्नु पर्छ तपाईको टाउको माथिल्लो क्षेत्र छ। तपाईं आफ्नो बस्ने कोठामा बस्दा वर्षा र वर्षा भएको चाहनुहुन्न। यदि तपाईले पर्खालमा कालो वा भिजेको दागहरू देख्नु भयो, अचानक ड्रिपहरू, वा अन्य चिन्ताजनक संकेतहरू, अब तपाईको स्थानीयलाई कल गर्न राम्रो समय छ। व्यावसायिक छतमा विशेषज्ञहरु.
यो कामको प्रकार होइन जुन तपाईं आफैले प्रदर्शन गर्न योग्य हुन सक्नुहुन्छ। यदि तपाई वृद्ध हुनुहुन्छ वा केवल कौसी कौसी छैन भने यो सबै अझ सत्य हुनेछ। यो तपाईको तर्फबाट यो काम ह्यान्डल गर्न एक विशेषज्ञलाई कल गर्नु राम्रो विचार हो। त्यसो गर्नाले तपाईंलाई सुरक्षित रहनको साथै ठूलो समय, प्रयास, र पैसा बचत गर्दछ।
तपाईंको छानामा कुनै फाटेका टाइलहरू वा चुहिनेहरू मर्मत गर्नु एक कदम हो जुन तपाईंको घरमा गम्भीर पुनर्विक्रय मान थप गर्दछ। यो तपाईं घर मा रहँदा को समयमा जीवन को एक धेरै उच्च गुणवत्ता आनन्द लिन सक्षम गर्दछ। यी कारणहरू र अधिकको लागि, यो एक लागत-प्रभावी चाल हो कि उद्योग विशेषज्ञहरू र घर मालिकहरूले अत्यधिक समर्थन गर्दछ।
तपाइँको कालीन र कालीनहरू प्रतिस्थापन गर्नुहोस्
यदि तपाईं वास्तवमै एक टन पैसा खर्च नगरी तपाईंको घरमा फरक पार्न चाहानुहुन्छ भने, रगहरू र कार्पेटहरूलाई हेर्नुहोस्। तपाईंले यी मध्ये कुनै एक प्रतिस्थापित गरेको कति समय भयो? ती मध्ये केही तपाईंको पुरानो घरबाट ल्याइएको हुनसक्दछ, जबकि अरूहरू तपाईंले घर खरीद गरेदेखि नै। ती धेरै सम्भवतः लगाइएको छ।
किनकि यो केस हो, तपाईको घरमा राम्रो किसिमले नयाँ घरको परिचय दिन सक्नुहुन्छ कि भनेर सोच्नका लागि यो राम्रो विचार हो। नयाँ र अधिक फैशनेबल मोडेलहरूको साथ तपाईंको कालीनहरू र कार्पेटहरू बदल्नु मात्र पहिलो सुरु हो। यहाँबाट, तपाईं तपाईंको घरलाई पूरै नयाँ अप-टु-डेट लुक र अनुभव दिन सक्नुहुन्छ। यो यस्तो दृश्य हो जुन पुनः बिक्रि मान थप्न सक्दछ।
तपाईले गर्न सक्ने सब भन्दा उत्तम चीज मध्ये एक तपाईंको भान्छा र बाथरूम क्षेत्रहरू ठीक गर्नु हो।
तपाईंको भान्साघर र बाथरूम क्षेत्रहरू ठीक गर्नुहोस्
त्यहाँ धेरै चीजहरू छन् जुन तपाईं गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो परिवारको घर को लागी spruce। तपाईले गर्न सक्ने सब भन्दा उत्तम चीज मध्ये एक तपाईंको भान्छा र बाथरूम क्षेत्रहरू ठीक गर्नु हो। यी केहि पहिलो स्थानहरू हुन् जुन तपाईको घरमा एक आगन्तुक चेक आउट गर्न चाहन्छ। तपाईं निश्चित हुनुहुन्छ कि तिनीहरू खरिदकर्तालाई अपील गर्न पर्याप्त आकारमा छन्।
तपाईं आफ्नो भान्छाघर र बाथरूममा सबै सि andक र faucets जाँच गरेर सुरू गर्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरू बदलिएको पछि कति लामो भयो? संभावना राम्रो छ कि तपाईं सायद उही स्थानमा घर संगै आएको ठाउँमा छन्। यदि ती खिया लागेका छन् वा चुहाउन सुरू गरिरहेछन् भने, तपाईले उनीहरूलाई रिटायर गर्न सक्नुहुनेछ र नयाँ नयाँ खरीद गर्न सक्नुहुनेछ।
भुइँ र टाइलको अवस्था के हो? यदि तपाइँको टाईलहरू क्र्याक वा क्रुबी हुँदै गइरहेको छ भने, तपाइँले त्यसलाई फाल्न र नयाँ प्राप्त गर्न आवश्यक पर्दछ। यदि तिनीहरू सभ्य आकारमा छन् तर केहि क्र्याकहरू छन् भने, तपाईं केहि समय र पैसा खर्च गर्न सक्नुहुनेछ तिनीहरूलाई अलिकता छुनुहोस्। दुवै क्षेत्रमा वालपेपर कति पुरानो छ? यो फाँट्ने र दुबै कोठामा रंग्ने समय हुन सक्छ।
यो तपाईंको घर स्प्रस गर्ने समय हो
तपाईंको घर मिलाउन धेरै पैसा खर्च गर्ने बारे चिन्ता लिनु आवश्यक छैन। यदि तपाइँ तपाइँको कार्डहरू ठीकसँग खेल्नुहुन्छ भने, तपाइँ यो खर्च गर्न अपेक्षा गरेको भन्दा कमको लागि यो गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईंको पुन: बिक्रि मानलाई बढाउने मर्मत गर्ने कामहरू तपाईंको पावरमा गर्नका लागि हो। तपाइँको घर खोज्न सुरू गर्नको लागि समय अब ​​हो।
सांप्रदायिक समाचार घर घर सुधार जीवनशैली